इन्सेक र आयोगका अधिकारीबिच छलफल सम्पन्न – इन्सेक
इन्सेक र आयोगका अधिकारीबिच छलफल सम्पन्न
काठमाडौँ ०७९ असार ७ गते
मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताउनु भएको छ ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयमा असार ६ गते इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली र आयोगका सदस्य ठाकुर नेतृत्वको टोलीबिच गरिएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्नकै लागि समेत इन्सेकले आन्दोलन र अभियान चलाएको स्मरण गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा गरेको प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘मानव अधिकार आन्दोलनको पर्यायका रूपमा रहेको इन्सेक अहिले राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचति छ । यो सबै इन्सेकले गरेको कर्मको विस्वास हो ।’
सदस्य ठाकुरले मानव अधिकार आन्दोलनको उचाइका लागि आयोगले इन्सेक लगायतका मानव अधिकार सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले इन्सेकले राखेको अभिलेखका कारण धेरै पीडितले न्याय पाउन सकेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थापनाकालदेखि नै आयोग र इन्सेकले धेरै काम सहकार्यमा गरेकाले आगामी दिनमा पनि सँगसँगै लागेर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा योगदान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेक अभियान र सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो ।
छलफलमा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टिकाराम पोख्रेलले इन्सेकले राखेको अभिलेख मानव अधिकार क्षेत्रमा बिर्सनै नसकिने काम भएको बताउनु भयो ।